छाउगोठ भत्काएर महिलालाई कहाँ पठाउने?
धनु विश्वकर्मा शुक्रबार, भदौ ११, २०७८, ०७:०४
आमा हरेक महिनाको पाँच दिन छाउगोठमा सुत्न जानुहुन्थ्यो। सानो छँदा म ती पाँच दिन आमासँगै हुन्थेँ। ती दिनमा आमामाथि हुने व्यवहार मलाई अनौठो लाग्थ्यो।
पछि ठूलीआमा, भाउजू, काकी र छिमेकका दिदीबहिनीहरु छाउ बस्दा पनि जान थालेँ। म छाउगोठमा उहाँहरुको साथी हुन जान्थेँ। छाउ बार्ने सबैको साथी हुनपर्दा मेरो बास घरभित्रभन्दा छाउगोठमा बढी हुन्थ्यो। म छाउगोठको कुरुवा नै भएको थिएँ।
आमा छाउपडी बस्न थालेपछि घरबाट कपडा ल्याइदिने, भित्रको अरु सामान बाहिर ल्याउने, खाना ल्याइदिने लगायत जिम्मेवारी मेरै थियो। आमा र भाउजूले गर्ने काम पनि मैले गर्नुपर्थ्यो। दिनभरि घरभित्रको काम गर्ने र राति छाउगोठमा सुत्ने मेरो दैनिकी हुन्थ्यो।
मेरो महिनावारी सुरु हुनुभन्दा पहिला नै मलाई यसबारे जानकारी थियो। निरन्तर छाउपडीमा सुत्नु परेपछि थाहा नहुने कुरै भएन।
हाम्रो परिवारको अलग्गै छाउगोठ थियो। पछि बार्दलीमा सुत्न थाल्यौँ। काकाको घरको एउटा कोठा अहिले पनि छाउगोठ (महिनावारी हँदा सुत्ने ठाउँ) भनेर छुट्याइएको छ। जो महिनावारी हुन्छन् सबैको सुत्ने थलो त्यही कोठा बनेको छ। त्यो कोठा घरको पहिलो तलामा छ। हाम्रोतिर घरको पहिलो तलामा गाईबस्तुको गोठ पनि हुन्छ।
म पहिलो चोटि महिनावारी हुँदा कक्षा ६ मा पढ्थेँ। त्यो दिनको घटना सम्झँदा अहिले पनि कहाली लाग्छ।
बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीसम्म सडक पुगेको थिएन। सदरमुकाममा हाम्रो पसल थियो। म बुवासँग पसलको सामान लिन मौरे बजार गएको थिएँ। मार्तडीबाट मौरै एक दिनको पैदलमा पुगिन्थ्यो। मौरेसम्म ट्याक्टरले सामान ल्याउँथ्यो। त्यहाँबाट भारी बोकेर मार्तडी पुग्न पैदल दुई दिन लाग्थ्यो।
म नुन बोकेर बुवासँगै पाइला मिलाइरहेको थिएँ। बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै महिनावारी भएँ। बासबस्ने ठाउँ पुग्दा शरीरभरि रगत भइसकेको थियो। हामी ताप्रिसेरा बजारमा बास बस्यौँ। भोलिपल्ट अर्को एक दिनको बाटो हिँड्न बाँकी नै थियो।
मनमा डर लागिरहेको थियो। अरुले थाहा पाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि थियो। बुवालाई भन्न पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। आमा, भाउजू र गाउँका जति पनि महिनावारी हुन्थे, त्यो कुरा परिवारमा खुलेर बताउँदैन थिए। लाज मान्थे। ‘महिनावारी भनेको त लाजको विषय पो रहेछ’ भन्ने सोच बनिसकेको थियो। तर, बुवाले आफैँ थाहा पाउनु भयो।
कम्मरमा पछ्यौरा बेरेँ, अनि पाँच केजी नुन पिठ्युँमा बोकेर अर्को दिन साँझ घर पुगेँ। बुवाले आफैँ आमालाई सुनाउनुभयो। आमाले अलग बस्न लगाउनुभयो। तर, बुवा र दाजुभाइको मुख भने हेरेँ। कसैले रोकेनन्।
महिनावारी भएको बेला स्कुलमा पनि समस्या पर्थ्यो। कहिले त बेन्चमा रगत लागेको हुन्थ्यो। महिनावारी भएर ड्रेसमा लाग्ला, अरुले थाहा पाउलान् भन्ने भय हुन्थ्यो। त्यसैले होला केटा साथीसँग नजिक हुन गाह्रो लाग्थ्यो। स्कुलमा पुरुष शिक्षक धेरै थिए। उहाँहरुलाई महिनावारी भएको भन्न लाज लाग्थ्यो। अथवा एक खालको डर पनि लाग्थ्यो। शिक्षिकालाई भने सजिलै भन्थ्यौँ।
स्कुलमा त्यस बेला ‘महिनावारी प्राकृतिक हो’ भनेर पढाइ हुन्थ्यो। तर, पढाइ र व्यवहार स्कुलमै पनि समान थिएन। र, अहिलेसम्म पनि छैन।
प्राकृतिक रूपले मासिकश्रावको ‘वरदान’ पाए पनि ‘अछुत’ हुन्छौँ भन्ने छाप मस्तिष्कमा गढेको थियो। आमा, भाउजूहरूले जे गरे हामीले त्यही बुझ्यौँ र त्यसैलाई निरन्तरता दियौँ। त्यही यथार्थ लाग्थ्यो। सिङ्गो समाजले पालना गर्दै आएको विषय भएकोले विद्रोह गर्न सक्ने मानसिकता बनेकै थिएन।
महिनावारी हुनु भनेको प्राकृतिक र शारीरिक रूपमा महिला प्रजननका लागि तयार हुनु पनि हो। सृष्टि संरक्षणार्थ मानव विकासको यो विशुद्ध प्रथम प्रक्रियालाई मान्छेहरू आफू अनुकूल बनाएर धर्म संस्कारसँग किन जोडेको होला? महिनावारी हुँदा मन्दिर जान नपाउने। पूजा गर्न नमिल्ने। भित्र पस्न नहुने। शारीरिक प्रक्रियालाई धर्ममा जोडेर महिलामाथि गरिएको यो चरम विभेद हो।
महिनावारी हुँदा प्रत्येक दिन छाउगोठको बास हुन्थ्यो। पढ्न नपाइने। होमवर्क गर्न नपाइने। त्यति बेला पक्की घरमा त बिजुली थिएन भने छाउगोठमा हुने कुरै भएन।
बढ्दो उमेरमा माया र सुरक्षा चाहिने अवस्थामा अभिभावकबाट टाढिनु पर्दाको मानसिक पीडा छुट्टै हुन्थ्यो। हरेक महिनाको पाँच दिन अहिले पनि हाम्रो ‘हक’ खोसिन्छ।
छाउगोठमा हुने हिंसा त अर्को कहालीलाग्दो विषय छ। त्यहाँ बलत्कार गर्ने र ज्यानै लिनेसम्मका घटना भएका छन्। छाउगोठमा निसास्सिएर कतिपयको मृत्युसमेत भएको छ। सर्पले टोक्ने अथवा जंगली जनावरले आक्रमण गरेका घटना पनि सुनिन्छन्।
हाम्रो धर्मले महिलालाई देवी मानेको छ। ती ‘देवी’ चाहिँ महिनावारी हुँदैनन् थिए होला? अझ हास्यास्पद कुरा महिनावारी हुँदा गाईबस्तु र फलफूलका बोटबिरुवा छुन नदिने। जनावर पवित्र हुने, तर महिनावारी भएको महिला अपवित्र हुने! हाम्रो चेताको स्तर यसले स्पष्ट बनाउँछ। अनि हामी कसरी प्रगतिशील छौँ भनेर भन्ने?
खाना पकाउने, भाडा धुने र घरको अरु सबै काम छोरीको जिम्मामा हुन्छ। छोराले काम नगरे पनि हुने, छोरीले गर्नैपर्ने।
महिनावारीको बेला शारिरीक रूपमा पनि अशक्त हुइन्छ। त्यति बेला आरामको खाँचो हुन्छ। प्रशस्त पोषणयुक्त खानाको जरुरी हुन्छ। हेरचाह र संरक्षणको आवश्यकता हुन्छ। तर, परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टो छ। दही, दूध त खानै पाइँदैन।
राजधानी काठमाडौंमा छाउगोठ छैनन्। तर, मानसिकतामा छाउगोठ जति नै भयानक छ। यहाँको ‘छाउप्रथा’ अलि भिन्न छ। छाउगोठ बस्न नपरे पनि विभेद उस्तै। पूजा कोठा जान नहुने, खाना पकाउन नमिल्ने, भाडा बस्ने महिलालाई ‘यता लुगा सुकाऊ, उता नसुकाऊ’ भन्ने, तुलसीको बोट नजिक जान नमिल्ने, छतमा जान नमिल्ने, भित्री वस्त्र सलमा लुकाएर सुकाउन पर्ने। इनार पनि छुन नहुने। यो ‘आधुनिक शैली’को छाउपडी प्रथा हो।
मानसिकतामा नै बसेको छाउपडी प्रथा हटाउन ठूलै पापड पेल्नुपर्ने देखिन्छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा यो कुप्रथाविरुद्ध काम गर्ने संघसंस्थाको लहर छ। तर, यसबारे जति कार्यक्रम गरे पनि र खर्च गरे पनि नतिजामुखी छैन। वास्तवमा छाउगोठ भत्काएर समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसको साटो महिलालाई ओडारमा खेदिन्छ। बरु कसरी व्यवस्थित बनाउने र चेतनाको लहर जगाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
छाउगोठ भत्काउनुअघि प्याड लगाउन सिकाउनुपर्छ। प्याड नपाउने ठाउँमा सफा कपडालाई कसरी प्याडको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने सिकाउनुपर्छ।
गाउँमा अर्को पनि समस्या हुन्छ। संयुक्त परिवारका लागि पर्याप्त कोठा हुँदैनन्। परिवारका धेरै सदस्य एउटै कोठामा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अलग–अलग कोठा बनाउन सकिएको हुँदैन। त्यस कारण पनि छाउगोठ आवश्यक भइरहन्छ। किनभने एउटै कोठामा बसेर प्याड बदल्न र सफाइको काम गर्न सकिँदैन। त्यही कोठामा आराम गरेर बस्न पनि समस्या हुन्छ। शान्त वातावरण नहुन सक्छ।
आज पनि गाउँमा आमा, काकी, भाउजूहरु भित्री वस्त्र लगाउँदैनन्। उनीहरुले प्याड लगाउन जानेकै छैन। प्याड नियमित किन्ने पैसा नहुन पनि सक्छ। आर्थिक नियन्त्रण पुरुषहरुकै छ। प्याड किन्नका लागि पनि पैसा माग्नुपर्ने हुन्छ। समस्या कति हुन्छन्, कति।
छाउगोठ भत्काएर महिलालाई सुरक्षित स्थान्तरण गर्ने ठाउँ तय गरिएको छैन। न त परिवारसँग बस्ने वातावरण छ, न चेतना पुगिसकेको छ। महिनावारीलाई उत्सवको रुपमा मनाउने वातावरण हुनुपर्ने हो, तर यो निकै परको कुरा हो। अहिले पनि महिनावारी ‘अपवित्रताको अलार्म’ भएको छ।
हरेक पुरुषले पनि बिहे गरेपछि सन्तान प्राप्तिको चाहना राख्छ। महिनावारी नहुने हो भने महिलाले बच्चा कसरी जन्माउन सक्छ? महिलाले जन्माएको बच्चा प्यारो हुने, अनि महिनावारी र गर्भधारण चैँ लज्जाको विषय बन्ने?
कतिपयले तर्क गर्छन्– महिला आफैंले महिनावारी भएकी अर्की महिलालाई छोइछिटो गर्छन्। यो समाज नै पितृसत्तात्मक छ। पुरुषले चलाएको चलनमा अन्जानवस महिलाले पनि साथ दिनु पितृसत्ताकै चरित्र हो। महिलाको जीवनको चक्र पुरुषले जसरी घुमायो त्यसरी नै घुम्ने हो।
यसको उदाहरण हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई हेरे पुग्छ। कुनै समय राज्यका प्रमुख निकायको नेतृत्व महिलाले गरेका थिए। तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिका र व्यवस्थापिकको नेतृत्वमा महिला थिए। सेरेमोनियल नै भए पनि सबैभन्दा उच्च ओहोदा राष्ट्रपति पदमा महिला नै आसिन छिन्। तर, महिला समानताको मुद्दा कति अघि बढ्न थाले त? हाम्रो संरचना कति पुरुषवादी छ भन्ने यसैले देखाउँछ।
कोही महिनावारी भएको महिलालाई पशुपतिमा पूजा गर्न लाउँदैमा, छाउगोठ भत्काउँदैमा, घरभित्र राख्दैमा समग्र महिलाको सामाजिक र सांस्कृतिक उत्थान भइहाल्दैन। महिलाका समस्याको व्यवस्थापन गर्ने आधार तयार हुनुपर्छ। जसमा पुरुषले समेत जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यसमा पनि सैद्धान्तिक बहस हुन जरुरी पर्छ।
छाउपडी प्रथाविरुद्धको अभियानमा महिला र पुरुषसँगै हुने हो भने यसलाई हटाउन नसकिने प्रश्नै छैन। हिजो खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्ने चलन तराई र पहाडमा नै व्याप्त थियो। तर, सरकारको अभियानमा सबैले साथ दिएपछि नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिशामुक्त देश भयो।
नेपालमै कुनै समय सतिप्रथा थियो। त्यसलाई महिलाको समस्या मानेर छाडेको भए आज पनि हाम्रा आमा, हजुरआमाहरु मात्र होइन केहीपछि हामी पनि सति जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने उदाहरण यी पनि हुन्। त्यसो भए छाउप्रथालाई भने हामी किन हटाउन सक्दैनौँ?
भारी बोक्न पाए पो दशैँ आउँछ !
पाठ्यपुस्तकमा भेटिन्छन् गान्धी र पृथ्वीनारायण, किन पढाइँदैन अम्बेडकर र बिसे नगर्ची?
श्रीमती जेलबाट छुटिन्, तर उनी जिन्दगीभर दुखिरहने छन्